ICT.com.mm မှာ Yealink ရဲ့ အသစ်ထွက် Yealink CP700 Medium Level Portable Speakerphone တွေ ဝယ်လို့ရပါပြီနော် ~ The ICT.com.mm Blog
ICT.com.mm မှာ Yealink ရဲ့ အသစ်ထွက် Yealink CP700 Medium Level Portable Speakerphone တွေ ဝယ်လို့ရပါပြီနော်
ရုံးမှာ Conference call တွေလုပ်ဖို့ အသုံးလိုအပ်မယ့် Speakerphone ကောင်းကောင်းတွေရှာနေရင်တော့ ICT.com.mm မှာ Yealink ရဲ့ အသစ်ထွက် Yealink CP700 Medium Level Portable Speakerphone တွေ ဝယ်လို့ရပါပြီနော်…
အချိန်ကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ Conference call လုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။
personal use အနေနဲ့ပဲသုံးမလား? office setting တွေမှာပဲ သုံးမလား? တကယ်ကိုလိုအပ်ပြီး၊ အသုံးတည့်စေမှာပါနော်။
Conference တွေမှာ multi-party calls တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အမြန်ဆန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် Yealink CP700 Medium Level Portable Speakerphone တွေမှာ အာမခံ(၂)နှစ်ပါဝင်တဲ့အပြင်၊
ဇန်နဝါရီလအတွင်း ဝယ်ယူအားပေးမယ်ဆိုရင် KBZPay, WavePay Cashback ပရိုမိုးရှင်းရှိတာဖြစ်လို့ ကျပ် ၅,၀၀၀ သက်သာစေနိုင်ဦးမှာနော်
Shop here: http://bit.ly/3pxNE2K
Newer ICT.com.mm မှာ K768,600 တည်းနဲ့ ကျောင်းသုံး၊ ရုံးသုံးအတွက် လုံးဝအဆင်ပြေစေမယ့် Acer Swift3SF314-57-33QL Silver (i3-10th Gen) တွေရောင်းပေးနေပါတယ်နော်
Older ICT.com.mm မှာ Redishow (Presentation Remotes & Set Top Up Box) တွေ ရောင်းပေးနေလို့ ဝယ်လို့ရတယ်နော်